Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Tag | Intelligence
Posted on February 11, 2017 by freeburma
Posted in Civil Wars - ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ	| Tagged Civil Wars, Feedly, IFTTT, Intelligence	| Leaveacomment |
Posted on October 29, 2016 by freeburma
မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့အသစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကာ ပကတိဖြစ်ရပ်မှန် မြန်မာသမိုင်းကို ဖော်ထုတ်သွားမည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆို
မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့အသစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကာ ပကတိဖြစ်ရပ်မှန် မြန်မာသမိုင်းကို ဖော်ထုတ်သွားမည်ဟု သာ
via The Ladies http://ift.tt/2frt3wv http://ift.tt/1t35IDK
Posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Intelligence	| Leaveacomment |
တိုက်ကြီးမြို့အဝင်တွင် အမျိုးသားတဦးကို ပစ္စတိုသေနတ်တလက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိ
တိုက်ကြီးမြို့နယ် တိုးဂိတ်မှာ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့က ယာဉ်တစီးအား ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာမှ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိ နေအောင်ဆိုသူကို ကျည်အပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ ပစ္စတိုတစ်လက်နဲ့အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ဘက်ကနေရန်ကုန်ကို မောင်းနှင်လာတဲ့ ယာဉ်မောင်း နေအောင်(ခ) ဖိုးသားကြီးမောင်းနှင်လာတဲ့ 3J/3353 LAND CRUISER အဖြူရောင်ယာဉ်ကို ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ ယာဉ်မောင်းနေအောင်ရဲ့ ဝဲဘက်ရှေ့ထိုင်ခုံ ၂ ခုကြား တူးဘောက်အတွင်းမှ အမေရိကန်နိုင်ငံထုက် ပစ္စတိုသေနတ်တလက်ကို ဖမ်းဆီးမိခဲ့တာပါ။
ကနေအောင်(ခ)ဖိုးသားကြီးကို လက်နက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉(စ) နဲ့ တိုက်ကြီးမြို့မရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်မင်းမင်းလတ်က တရားလိုပြုလုပ်ပြီး အရေးယူအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ – မေသွယ်
The post တိုက်ကြီးမြို့အဝင်တွင် အမျိုးသားတဦးကို ပစ္စတိုသေနတ်တလက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိ appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2eZ2hZQ http://burmese.dvb.no
Posted on October 27, 2016 by freeburma
ရန်ကုန်တွင် ဇီကာရောဂါဖြစ်နေသည့် နိုင်ငံခြားသူတွေ့ရှိ
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဇီကာရောဂါလက္ခဏာသံသယရှိသည့် နိုင်ငံခြားသူတစ်ဦးကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းကို ဓါတ်ခွဲစမ်း သပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် အတည် ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ MOI ဝက်ဆိုက်တွင် သတင်းရေးသားထားသည်။
အဆိုပါ ဇီကာရောဂါလက္ခဏာသံသယရှိသူ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် ရှိ နိုင်ငံခြားသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အောက်တိုဘာ ၂၇ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့နယ် အတွင်း၌ တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် လိုအပ်သောဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဇီကာရောဂါ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဇီကာရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်သော ကာကွယ် ထိန်းချုပ် နှိမ်နှင်းရေးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ရှိသူများက အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ၀န်ကြီးဌာနမှ ကနဦးသတင်းရရှိသည်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/2dLY5ia http://ift.tt/1nfHMox
Posted on October 26, 2016 by freeburma
သရဲစီး စာသင်ကျောင်းအတွင်း ပရလောကသားများကို သေနတ်ပစ်ဖောက်နှင်ထုတ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြောင်းမြမြို့နယ် ရှမ်းရေကျော်ကျေးရွာ အထက(ခွဲ) စာသင်ကျောင်းမှာ သုသာန်မြေ နယ်နိမိတ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်အမိန့်ပြန်ပြီး ပရလောကသားတွေကို သေနတ် ၁၈ ချက် ပစ်ဖောက်နှင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ အစိုးရပြန်ကြားရေးက သတင်းထုတ်ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဂျော်နီနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် နေ့လယ်က ရှမ်းရေကျော် အထက(ခွဲ) ကျောင်းမှာ ဆရာ ဆရာမတွေ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ရွာသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးနောက် ခုလို ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
မြောင်းမြမြို့ တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဦးက ၀န်ကြီးချုပ်ဦးမန်းဂျော်နီက ကျောင်းပိုင်မြေဖြစ်လို့ ပရလောညကသားတွေ ရှိရင်လည်း ထွက်သွားဖို့ အမိန့်ပြန်တမ်း ထုတ်တာလို့ ပြောပါတယ်။
“ကျမတို့ဘက်က တာဝန်ရှိတဲ့အနေနဲ့ သင်္ချိုင်းကုန်းရဲ့နယ်မြေကို မြေသွားပြီး သတ်မှတ်ပေးတာ ပါ။ မြေသတ်မှတ်ပေးပြီး ကျောင်းဧရိယာဖြစ်သွားပါပြီဆိုတာရယ် ကျောင်းဧရိယာ ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဥပမာ ပရလောကသားတွေ ရှိမယ် ဆိုရင် ထွက်သွားပေးပါဆိုတဲ့ ကြေညာစာမျိုး ကို ၀န်ကြီးချုပ်က သွားထုတ်ပေးတာပါ။”
တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အမိန့်ပြန်တမ်းမှာ “၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး မြောင်းမြမြို့နယ် ရှမ်းရေကျော်ကျေးရွာ အထကခွဲ ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောာက်လုပ်ရာမှာ သုသာန်မြေနေရာမှ သုည ဒသမ ၃၆ ဧက ကျုးကျော် ပါသွားခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ သုသာန်နှင့် တောင်ဘက်ကပ်ရပ်ရှိ ကျောင်းဆောင်မြေနေရာမှ သုည ဒသမ ၃၆ ဧက ထုတ်နုတ်ပြီး သူသာန်မြေအဖြစ် အစားထိုး ပြန်လည်ပေးအပ်ကာ ကျေးရွာသုသာန်ဧရိယာအား ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်။ ရှမ်းရေကျော်ကျေးရွာ အထက ခွဲမှ ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ရန် ကျုးကျော်ပါဝင်သွားသည့် ဧရိယာအစား ကျေးရွာသုသာန်မြေအား အစားထိုး ပြန်လည်ပေးအပ်ရွေ့ ကျေးရွာသုသာန်မြေအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ထို့အတွက် ရှမ်းရေကျော်သုသာန်အတွင်း နေထိုင်ကြသည့် မြင်အပ် မမြင်အပ် ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ရှမ်းရေကျော် အထကခွဲအတွင်း ပညာသင်ကြားနေသည့် ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား ၀င်ရောက်ပူးကပ်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ အခြား မလိုလားအပ်သော ခြောက်လှန့်မှု များ မပြုလုပ်ကြရန် ဤအမိန့်ကို ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်သည်” လို့ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
မြောင်းမြခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီး ညွန့်ဇော်ကလည်း ရှမ်းရေကျော် အထက ကျောင်းကွဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျောင်းသူလေးတွေကို တစ္ဆေ၊ သရဲ ပရလောကသား တွေ ပူးကပ်သည်ဟုဆိုကာ ငိုယိုအော်ဟစ်ခြင်း၊ မူးဝေအော့အန်ခြင်းနဲ့ သတိလက်လွတ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ် ၁၈ ချက် ပစ်ဖောက်ကာ ပရ လောကသားတွေကို အချက်ပေးနှင်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရှမ်းရေကျော်ကျေးရွာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲရှိ ကျောင်းသူ ၁၈ ဦး ဟာ သြဂုတ်လကစလို့ ကျောင်းမှာ သရဲပူးတယ်ဆိုတဲ့ အပြုအမူတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။
ဆေးပညာရှင်တွေကတော့ ဒါဟာ လူမှုရေးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေအပေါ် မူတည်ပြီး အုပ်စုဖွဲ့ တုံ့ပြန်တဲ့ အပြုအမူ ပြုမူနေကြတာလို့ပြောပါတယ်။
The post သရဲစီး စာသင်ကျောင်းအတွင်း ပရလောကသားများကို သေနတ်ပစ်ဖောက်နှင်ထုတ် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2dHQuwa http://burmese.dvb.no
Posted on October 17, 2016 by freeburma
ကြောက်ရွံ့မှု အမှောင်ထဲက မောင်တော
မောင်တောမြို့အနီး လုံမြို့ရေး တာဝန်ယူနေသော ရဲတပ်သားနှင့် ထောက်ပို့ ရဟတ်ယာဉ် (ဓာတ်ပုံ – သော်ဟိန်းထက်/ဧရာဝတီ)
တစုံတယောက်က သင်၏အိမ်တွင် အလုပ်လာလုပ်ပြီး သင်၏ပစ္စည်းများကို ခိုးသည်။ ထို့နောက် သင်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ယူဆောင်သွားသည်။ ထိုနေ့က သင်ဆုံးရှုံးသောနေ့ ဖြစ်ပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော မြို့နယ် ကျီးကန်းပြင်၊ ကိုးတန်ကောက်နှင့် ငါးခူရ အခြေစိုက် စခန်းများတွင် တုိုက်ခိုက်ခံခဲရပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ကာ သေနတ် ၅၁ လက် သိမ်းဆည်း ယူဆောင်သွားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတွင်လည်း ယင်းနယ်ခြားစောင့် ရဲဌာန ၃ ခုတွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သော ဒေသခံ မွတ်စလင် တချို့ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ရဲအများစုက ကောက်ချက်ချ ယုံကြည်ခဲ့သည်။
သွေးများ၊ ဦးထုပ်များ၊ စောင်များနှင့် သောက်ရေသန့်ဘူးများသာ ကျန်ရှိနေသော ကိုးတန်ကောက် ရဲအခြေစိုက်စခန်း ကို အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ ညက အမည်မသိ လက်နက်ကိုင် အမျိုးသားများက ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွင် ရဲ ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၂ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
စစ်တွေမြို့မှ ရဲအရာရှိကြီး တဦးနှင့် အတူ ကိုးတန်ကောက်တွင် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ် ရာတွင် လိုက်ပါခဲ့သော ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ရင်းနှီးသည့် သတင်း အရင်းအမြစ် တခုက လက်နက်ကိုင် အမျိုးသားများ အခြေစိုက် စခန်းသို့ မည်သို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းနှင့် မည်သည့်နေရာမှ လက်နက်များ သိမ်းယူသွားသည်ကို ဖော်ပြထားသည့် ဓာတ်ပုံ ကျနော့်ကို ပြသခဲ့သည်။
“သူတို့တွေ အဲဒီအခန်းကို အခုထိ သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ရသေးပါဘူး။ အခန်းထဲမှာ သွေးတွေ ရှိနေသေးတဲ့အတွက် အနံ့တွေ မကောင်းပါဘူး။ ရဲတွေက သေနတ်တွေကို တနေရာကနေ တနေရာပြောင်းပြီးတော့ ၀ှက်ထားခဲ့တာပါ။ အဲဒါတောင်မှ ဒီ လက်နက်ကိုင်တွေက သေနတ်တွေ ဘယ်မှာ ၀ှက်ထားတယ်ဆိုတာ အတိအကျ သိပါတယ်”ဟု အဆိုပါ သတင်း ရင်းမြစ် က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ကျီးကန်းပြင် ရဲဌာနချုပ်စခန်းကိုလည်း လက်နက်ကိုင် အမျိုးသားများ မည်ကဲ့သို့ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည် ဆိုသည် ကိုလည်း ကျနော့်ကို ပြောပြပါသည်။ အဆိုပါ စခန်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။
“ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ဦး အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဌာနချုပ်စခန်းတွေကို ပထမဆုံး ၀င်တိုက်တာလို့ သူတို့က ယုံကြည်ထားတယ်။ နောက် တော့ အခြားအခြေစိုက်စခန်း ၂ ခုလည်း တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်”ဟု သူကပြောသည်။
ထိုလက်နက်ကိုင် အမျိုးသားများက ရဲဌာနချုပ်စခန်းကို တိုက်ခိုက်ကာ သေနတ်များကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ထိုလက်နက် များ ကို သယ်ဆောင်ရန် စခန်းမှ ကားကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်က ဆိုသည်။
အဆိုပါ အခြေစိုက်စခန်းတွင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်သူများနှင့် အလုပ်လုပ်သူများသည် ယင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု ကောက်ချက်ချကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
“ကျီးကန်းပြင်စခန်းမှာ သေနတ်တွေ ဘယ်မှာသိမ်းထားတယ်ဆိုတာ သူတို့တွေ အကုန်သိနေ တယ်။ ပြီးတော့ ကိုးတန်ကောက်မှာလည်း သေနတ်တွေ ဖွက်ထားတဲ့နေရာကိုတောင် သိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီတိုက်ခိုက် မှုမှာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့သူတွေ ပါတယ်လို့ ပြောကြတာပါ”ဟု သတင်းရင်းမြစ် က ပြောဆိုသည်။
ရဲစခန်းများနှင့် ရုံးများတွင် ဒေသခံမွတ်စလင် အမျိုးသားများကို သန့်ရှင်းရေးနှင့် အလုပ်လုပ်ရန် စေခိုင်းခြင်းသည် မောင်တောရှိ အစိုးရရုံးများ၏ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ပြီး ရခိုင် တိုင်းရင်းသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လည်း ဈေးဆိုင်မှ သို့မဟုတ် ဈေးမှ ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်ရာတွင် ထို အမျိုးသားများကို ခိုင်းစေကြသည်။ ဧည့်ရိပ်သာများတွင်လည်း သန့်ရှင်းရေး အတွက် မွတ်စလင် လူငယ်များကို ခိုင်းစေကြသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က ဧရာဝတီ သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်များက ကျီးကန်းပြင်ရွာသို့ အခြား သတင်း ထောက်များနှင့်အတူ သွားရောက်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ သွားရောက်ရာတွင် အမှတ်(၁) နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်တွင် တပ်မတော် နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ကျနော်တို့ကို တားမြစ်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်က သတင်းထောက်များကို မြောက်ဘက်ဒေသသို့ ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခွင့် မပြုခဲ့ပေ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် တပ်မတော်က ထိုလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များကို ရှာဖွေမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဂျာနယ်လစ်များ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိ၍ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် ကျနော်တုိ့က နောက်ထပ် ၄မိုင်ဝေးသော အောင်မင်္ဂလာ ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ကြသည်။
အောင်မင်္ဂလာသို့ သွားရောက်ရန် ရဲမှူးကြီး မျိုးလင်းအောင်ကို ဖုန်းဖြင့် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့ရာ ၎င်းက အောင်မင်္ဂလာ ကျေးရွာသို့ မသွားရောက်ရန်နှင့် ဘာကြောင့် အာဏာပိုင်များက ခွင့်မပြုသည့် အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
“လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေက အချို့ဒေသတွေမှာ သုံးလစာအတွက် အစားအစာတွေ ၀ှက်ထားတယ်လို့ ကျနော်တို့ သတင်း ရထားပါတယ်။ အဲဒီဒေသတွေမှာပဲ ကျနော်တို့ဆီက ယူသွားတဲ့ သေနတ်တွေကို ၀ှက်ထားတယ်လို့လည်း သတင်းရထားပါ တယ်။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေက အဲဒီဒေသတွေမှာ လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီဒေသတွေမှာ သူတို့ကို ရှာဖို့ စစ်တပ်က ဆောင်ရွက်နေတာပါ”ဟု သူက ပြောသည်။
ကျီးကန်းပြင် ရဲဌာနချုပ်ရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် တပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူး တဦးက ထိုနေ့တွင် တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်းအရာရှိ ထံမှ ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ရန် အမိန့်ရ ရှိခဲ့ကြောင်း ကျနော်တို့ကို ပြောပြသည်။
“ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ကြိုဆိုပါသည်”ဆို သော ဖုန်းမက်ဆေ့ တစောင် ကျနော် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ဖုန်းခေါ် ဆိုပါက တမိနစ်လျှင် တထောင်ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး မက်ဆေ့ပို့လျှင် ငါးရာကျပ် ကျသင့်မည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ထိုသို့ ဖုန်းမက်ဆေ့ပို့သည်မှာ အံအားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကျနော်ရပ်နေသည်မှာ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်သော မြစ်ကြောင်းတွင် ရပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုနယ်စပ်တလျှောက်တွင် တရားမ၀င် မူးယစ် ဆေးဝါးများ၊ သေနတ် လက်နက်များ၊ သစ်တင်ပို့မှုများ နေ့စဉ်လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ် နေကြပြီး မောင်တောမှ ရခိုင်ဒေသခံများက တရားမ၀င် လူများဟု စွပ်စွဲပြောဆိုသော သူများ ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက် သော အဓိကနေရာဖြစ်သည်။
မွတ်စလင် အများစု နေထိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု ၁၂၀၀ နေထိုင်သော အလယ်သံကျော်ရွာမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာ လူကြီး ဦးဇော်ထူးက “ကျနော်တို့ရွာမှာ လုံခြုံရေးအတွက် အရမ်းကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒီမြစ်ကနေ သူတို့တွေ နေ့တိုင်း ဖြတ်လာနေတာကို အဝေးကနေ မြင်ရပါတယ်။ မလာဖို့ ဘယ်သူကမှ သူတို့ကို တားလို့ မရပါဘူး။ ကျနော်တို့နဲ့ အရမ်းကပ် နေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ လိုလည်း အချိန်မရွေး ၀င်ထွက်နေကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ဒီမြစ်ကနေတောင် သေနတ်တွေ သယ်နိုင်ပါတယ်”ဟု ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၂ခုနှစ်က တကြိမ် ထိုရွာအနီးဝန်းကျင်တွင် မြန်မာအစိုးရက လက်နက်များ သိမ်းဆည်း ရရှိခဲ့ကြောင်း လည်း ဦးဇော်ထူးက ပြောပြသည်။
အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် စာသင်ကျောင်းအားလုံး ပိတ်ထားခဲ့ပြီး အစိုးရ ၀န်ထမ်း များလည်း ထိုရွာမှ ရွေ့ပြောင်းခဲ့ကြသည်။
သို့သော် အလယ်သံကျော်ရွာတွင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ အလယ်သံကျော်ရွာမှ လူနည်းစုဖြစ်သော ရခိုင် တိုင်းရင်း သား ၁၀၀ ကျော်တို့သည်လည်း ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမည်ကို စိုးရိမ်၍ ရွာမှ ရွှေ့ပြောင်း လာခဲ့ကြသည်။
“ဒီမှာ သူတို့ လှုပ်ရှားမှုက နေရာတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ သတင်းရထားပေးမယ့် မျက်စိနဲ့တော့ မမြင်ရသေးဘူး”ဟု ဦးဇော်ထူးကပြောသည်။
အများစုသည် မွတ်စလင်များဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုကို မြင်တွေ့ရန် ခက်ခဲကြောင်းလည်း ဦးဇော်ထူးက ရှင်းပြသည်။
သူတို့က လူစိမ်းတယောက် ၀င်လာသည်ကို တွေ့လျင် ချက်ချင်း မေးမြန်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း အဖြစ်အပျက်များကို လေ့လာရန် သို့မဟုတ် သူတို့ ဘာလုပ်နေသည်ကို သ်ိရန် ခက်ခဲသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ရဲအခြေစိုက်စခန်း ၃ ခု တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် ပါဝင်သူများအကြောင်းကို မေးမြန်းသောအခါ “ဒေသခံ မွတ်စလင် တွေ မပါဘဲ နဲ့ ရဲ စခန်းကို ၀င်တိုက်ခိုက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး”ဟု ဦးဇော်ထူးက ပြောသည်။
RSO (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့ဝင်များ ထိုဒေသတွင် ရှိနေသေးကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့က မောင်တော ဒေသ ကို လိုချင်နေကြကြောင်း ဦးဇော်ထူးက ဆက်ပြောသည်။
လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများ တွင် Rohingya voice မှ ဖော်ပြသော ဗီဒီယိုတွင် ပါရှိသည့် မောင်တော မြောက်ပိုင်းမှ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးကို မြင်ဖူးကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ဒီအဖွဲ့မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက တယောက်မှ မပါဘူး။ အကုန်လုံး မောင်တော မြောက်ပိုင်းကပဲ။ ကျနော် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့် လိုက်တော့ အဲဒီခေါင်းဆောင်ကို ဒီမှာ မြင်ဖူးတယ်ဆိုတာ သတိရလိုက်တယ်။ သူက စကား (စစ်တကောင်း ဘင်္ဂါလီ ဘာသာ စကား) ပြောတာက ဒီဘက်ကလေသံနဲ့ ပြောနေတာပါ”ဟု ဦးဇော်ထူးက ပြောသည်။
ထို ဘာသာစကား နားလည်သည့် ဦးဇော်ထူးက “သူက သူတို့ မွတ်စလင် တွေကို သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီး အကုန်လုံး လွတ်လပ်ဖို့ အတွက် တိုက်ဖို့ ဆောင်းဆိုနေတာ။ အကယ်၍ သူတို့အားလုံး တိုက်ပွဲဝင်ရင် ဒီတော်လှန်ရေးက မကြာခင်မှာ အောင်မြင်ပါ လိမ့်မယ်လို့ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ပြောသောစကား၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ပြန်လည် ပြောပြခဲ့သည်။
အလယ်သံကျော် ကျေးရွာမှု အစိုးရ၀န်ထမ်း မွတ်စလင် ဆရာဝန် တဦးဖြစ်သူ ဦးဘချိုကလည်း ထိုလက်နက်ကိုင် အမျိူးသား များသည် မောင်တော မြောက်ဘက်ပိုင်းမှ ဒေသခံများ ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“အခုလိုကြားရတာ အံ့အားသင့်တယ်။ သူတို့တွေဘယ်လို တိုက်ခိုက်ကြတာလဲ။ ကျနော်တို့ ဘ၀မှာ ဒါမျိုးတခါမှ မကြားဖူး ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကျနော်တို့ အားမပေးပါဘူး”ဟုလည်း ဦးဘချိုက ပြောဆိုသည်။
ခရီးသွားလာရေး လုံခြုံရေး တင်းကျပ် ၊ သတင်းရယူခွင့် ခက်ခဲ
မြန်မာအစိုးရက မောင်တောမြို့ အ၀င်အထွက်ကို ပိတ်ထားခဲ့ပြီး ည ၇ နာရီမှ မနက်၆နာရီအထိ အပြင်မထွက်ရ အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့ကြောင့် မောင်တောမြို့တွင် အပြင်မထွက်ရအမိန့် မစတင်မီ လမ်းမပေါ်တွင် လူသူလေးပါး ကင်းမဲ့နေခဲ့သည်။
လမ်းမပေါ်တွင် မောင်တောသို့ ၀င်ထွက်သော ခရီးသွား မည်သည့် မွတ်စလင်ကိုမဆို ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်က မေးမြန်း သည်။
အာဏာပိုင်များက မြို့အပြင်ဘက်သို့ အစားအစာများ သယ်ဆောင်သွားခြင်းကို ခွင့်မပြုဘဲ တချိန်တည်းတွင် တပ်မတော် ကလည်း မြို့အပြင်ဘက်တွင် စစ်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
ထို့အပြင် အာဏာပိုင်များက မည်သူမဆို ပင်လယ်ပြင်တွင် ငါဖမ်းခြင်းကို ခွင့်မပြုသည့်အတွက် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအားလုံး ရပ်ဆိုင်းထားရပြီး ရာပေါင်းများစွာသော မွတ်စလင် များအတွက် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ငါးနှင့် ပင်လယ် စာများ ကိုလည်း ၀ယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ။
ကုန်ဈေးနှုန်းများလည်း တိုးမြင့်လာခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများ၏ အဆိုအရ သိရသည်။ ထိုသို့ ပဋိပက္ခ မဖြစ်ပွားမီက ဆန်တ အိတ် လျှင် ၂ သောင်း ၄ထောင်ကျပ် ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ၂သောင်း ၈ထောင်ကျပ် အထိ ဈေးတက်သွားခဲ့သည်။
ယခင်က သကြား တပိဿာလျင် ၁၅၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိဈေးမှာ ၂ထောင်ကျပ် ဖြစ်သည်။ နွားနို့တဘူး လျှင် ၇၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ၈၀၀ ကျပ်အထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ထို့အတူ ဆီ တပိဿာမှာလည်း ၂၅၀၀ ကျပ်မှ ၃၅၀၀ ကျပ်အထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ MPT ဖုန်း ငွေဖြည့်ကတ် ကျပ် ၅၀၀၀ တန် တကတ် လျှင် ၅၉၀၀ ကျပ် ပေးရသည်။
မွတ်စလင်များ နေထိုင်သော မောင်တော မြောက်ပိုင်း ရွာများတွင်လည်း တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တပ်မတော်က ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် လုံခြုံမှုကို အပြည့်အ၀ မထိန်းချုပ်နိုင်သေးပါ။ မောင်တောမြို့ပေါ်တွင် ရွေ့ပြောင်းသူများ ပိုမို ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ တချို့ရွေ့ပြောင်းသူများက ၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုးသားချင်း အိမ်များတွင် နေထိုင်ကြပြီး တချို့က ဘုန်းကြီး ကျောင်း များတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတခုတွင် လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ပြောင်းရွေ့နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသည် မွတ်စလင်များ သေနတ်ရသွားပြီး တပ်မတော်ကို ပြန်တိုက်သည်ကို သိသောအခါ ထို လက်နက်ကိုင် အမျိုးသားများက မကြာခင် ၎င်းတို့ဒေသသို့ လာရောက် တိုက်ခိုက်မည်ကို ကြောက်လန့်နေကြသည်။
တပ်မတော်က စစ်ဆင်ရေး စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် အရပ်သားများ၏ နေအိမ်များကို မီးရှို့ခဲ့သည်ဟု တချို့ ဓာတ်ပုံ ဆရာများက ပြောသည်။
ဒေသခံ မွတ်စလင် များကလည်း တိုက်ခိုက်မှုကို ကြောက်လန့်၍ ရွာများကနေ ထွက်ပြေးကြသည်။
တပ်မတော် က တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားသော ဒေသများသို့ ၀င်ရောက်ရန် တားမြစ်ထား၍ မီဒီယာများ အတွက် တိကျသော သတင်း အချက်အလက် ရရန် ခက်ခဲပါသည်။
ထို့အပြင် မွတ်စလင်များ ဘက်ကလည်း မီဒီယာများနှင့် မတွေ့ဆုံရဲကြပါ။
The post ကြောက်ရွံ့မှု အမှောင်ထဲက မောင်တော appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/2efiCbG http://ift.tt/1OYtTeJ
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2dTd37A http://ift.tt/Tf1V41
မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဖယ်ရှားကြောင်း သမ္မတ အိုဘားမား ကြေညာ
စက်တင်ဘာ ၁၄ တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အိုဘားမား (ဓာတ်ပုံ – Reuters )
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုများကို ပယ်ဖျက်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးအရ ဒဏ်ခတ် အရေးယူရန် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများ ဖြေလျှော့ပေးရန်နှင့် အမျိုးသား အရေးပေါ် အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းရန် သမ္မတ အိုဘားမားက ယမန်နေ့က လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သည်။
၂၀၁၅ သမိုင်းဝင် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်မှု အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီ ဆက်လက်တိုးတက်ရေး အားပေးရန် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ရုပ်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ကြောင်း အမေရိကန် လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော စာတွင် သမ္မတ အိုဘားမားက ပြောဆိုထားသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စက်တင်ဘာလ အမေရိကန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ချမှတ်ထားသော စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု တချို့ကို ရုပ်သိမ်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားက ပြောဆိုခဲ့သည်။
The post မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဖယ်ရှားကြောင်း သမ္မတ အိုဘားမား ကြေညာ appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/2ebHHaQ http://ift.tt/1OYtTeJ
Posted on October 5, 2016 by freeburma
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှင့် ပဋိပက္ခ မိုတယ်ရွှေပြည်သာ ရှင်းလင်း
မိုတယ် ရွှေပြည်သာ (ဓာတ်ပုံ – မိုတယ် ရွှေပြည်သာ ဖေ့စ်ဘုတ်)
ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ် သစ္စာပန်းခြံလမ်းရှိ မိုတယ်ရွှေပြည်သာက ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဉာဏ်လင်း အား အမှုဖွင့်ထားရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယနေ့ မိုတယ်ရွှေပြည်သာတွင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် ကြောင်း သိရသည်။
“အဓိကရည်ရွယ်ချက်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဉာဏ်လင်း ပြောတာဟာ ကျနော်တို့ဘက်က မတရားပြောတာ လို့ ပြောတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ဘက်က မှန်ကန်ကြောင်းဆိုတာကို ပြသတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပါ”ဟု မိုတယ်ရွှေ ပြည်သာ ၏ Supervisor ကိုမောင်မောင်လေးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဉာဏ်လင်း သည် အောက်တိုဘာ ၁ ရက် ည ၁၁ နာရီခန့် က မိုတယ် ရွှေပြည်သာသို့ တခြားသူနှစ်ဦးနှင့်အတူ ကာရာအိုကေ ဆိုရန် ရောက်ရှိလာခဲ့ရာ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများနှင့် အချင်း များခဲ့ပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့ ညနေတွင် အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ကိုမောင်မောင်လေးက “ဦးဉာဏ်လင်း ဆိုတာဟာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တယောက်။ သိက္ခာရှိတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ဟိုတယ်ထဲကိုလာပြီးတော့ မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ လာသောင်းကျန်းသွားတာကို ကျနော်တို့က ဥပဒေ အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ”ဟုလည်း ပြောဆိုသည်။
မိုတယ်ရွှေပြည်သာ ဖွင့်လှစ်ထားသည်မှာ တနှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်ပြီး ကာရာအိုကေ ဖွင့်ထားသည်မှာလည်း လာရောက် တည်းခိုသည့် ဧည့်သည်များအတွက် ဖျော်ဖြေမှုတခုအဖြစ် ဖွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၁ နာရီ အခမဲ့ သီဆိုခွင့်ပေးထား ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
အမှုဖွင့်ခံရသူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဉာဏ်လင်း က “လောလောဆယ် တုံ့ပြန်ဖို့ မရှိပါဘူး။ မရှိဘူး ဆိုတာက ကျနော် သူတို့စွဲထားတဲ့ ပုဒ်မတွေ တခုမှ မကျူးလွန်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီကို သွားတဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်က ဒေသခံ ပြည်သူတွေက တိုင်ကြားတာရှိတယ်။ အဲဒီတိုင်ကြားတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မှန်လားမမှန်ဘူးလား လေ့လာဖို့ သွားတာ”ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက မိုတယ်သို့သွားရောက်မည်ကို မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ် ရဲစခန်းများသို့ ကြိုတင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း တပြိုင်တည်း ၀င်သွားပါက မိုတယ်ပိုင်ရှင် အနေဖြင့် ပြစ်မှု ကျူးလွန် သကဲ့သို့ဖြစ်မည် စိုးရိမ်သောကြောင့် ပြည်သူများ တိုင်ကြားထားမှု ဟုတ်မဟုတ် လေ့လာသည့်သဘောဖြင့်သာ သွားရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
ဦးဉာဏ်လင်း က“ကာရာအိုကေ ဆိုဖို့တာ မှားတယ်။ ဒေသခံတွေတိုင်တာ အတည်ယူလို့မရဘူး။ မဟုတ်ဘဲလုပ်လိုက် ရင် ကာယကံရှင်နစ်နာမယ်။ အဲဒီလိုမျိုး နာရီဝက်တန်သည်၊ တနာရီတန်သည် ခဏထိုင်မယ်။ အအေးလေး ဘာလေး သောက်မယ်။ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆို ပြန်မယ် ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လာခဲ့တာပါ။ တခုတော့ ရှိတာပေါ့။ အဲဒီမှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တဦးအနေနဲ့ လာတာ မဟုတ်ဘူး။ သာမန် Customer တဦးအနေနဲ့ လာလိုက်တာကို ကလေးတွေ အနေ နဲ့ နည်းနည်းစိုးရိမ်သွားတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်”ဟုလည်း ပြောဆိုသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဉာဏ်လင်း အပါအ၀င် ၃ ဦးကို ရွှေပြည်သာ မြို့မရဲစခန်းတွင် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၉၄(ဆဲဆိုမှု)၊ ၅၀၆(ခြိမ်းခြောက်မှု)၊ ၁၁၄(အားပေးကူညီမှု)ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
The post လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှင့် ပဋိပက္ခ မိုတယ်ရွှေပြည်သာ ရှင်းလင်း appeared first on ဧရာဝတီ.
via သတင်း – ဧရာဝတီ http://ift.tt/2e2IydK http://ift.tt/1PXzsvq
နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ရာနေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ဇေယျသိဒ္ဒိ ရပ်ကွက် မြနန်းဘုံသာလမ်း အိမ်နံပတ် ၃၃ မှာ နေထိုင်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိမ်လမ်းထိပ်မှာ အောက် တိုဘာလ ၄ ရက် မနေ့ကစပြီး လုံခြုံရေးရဲကင်း တခုချထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2e2J1wE http://www.rfa.org
Posted on October 1, 2016 by freeburma
ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တခုမှ ငွေသွင်းငွေထုတ်မြင်ကွင်း။(ဓာတ်ပုံ-Reuters)
ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တချို့က ခေါ်ယူအပ်ငွေ (Call Deposit ) အပေါ်ပေးရသည့် အတိုးနှုန်းများ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ လျှော့ချလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ခေါ်ယူအပ်ငွေ (Call Deposit) ဆိုသည်မှာ ဘဏ်များတွင် အပ်ငွေများကို တရက်တာ သို့မဟုတ် အပ်နှံသည့် ရက်အလိုက် နေ့စဉ် အတိုးနှုန်း ရရှိသည့် စနစ်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စနစ်ကြောင့် ဘဏ်များတွင် အတိုးရယူရန် လာရောက်အပ်နှံသည့် ငွေကြေးများပြားပြီး အတိုးပေးရသည့် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာရကြောင်း ပြည်တွင်းဘဏ်အသိုင်းအ၀ိုင်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ကမ္ဘ့ာရတနာဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်သော ဒေါက်တာ လှညွှန့်က “ဘဏ်တွေမှာခေါ်ယူအပ်ငွေ တွေ များ လာလေ အတိုးတွေ များလာပြီး ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်တယ်။ ဘဏ်ကြီး တွေက ခံနိုင်ရည်ရှိပေမယ့် ဘဏ်သေးတွေက ခံနိုင်ရည်မရှိတာ ကြာပြီ။ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကို လျှော့ချတာ”ဟု ပြောသည်။
ခေါ်ယူအပ်ငွေ ( Call Deposit )အတွက် ဘဏ်များက နေ့စဉ်ပေးသည့် ဘဏ်အတိုးနှုန်းသည် ဘဏ်အလိုက် ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ဘဏ်များအကြား အပ်နှံငွေ များပြားလာစေရန် အပြိုင်အဆိုင် ဆွဲဆောင်ကြရာမှ ယင်းစနစ်
ကမ္ဘောဇဘဏ်အကြီးတန်း မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ တဦးဖြစ်သူ ဦးသန်းချိုက “ခေါ်ယူအပ်ငွေ အပေါ် အတိုးလျှော့တဲ့ ဘဏ်လည်းလျှော့တယ်။ မလျှော့တဲ့ဘဏ် လည်း မလျှော့ဘူး။ သောကြာနေ့ ညနေ လာအပ်တယ်။ တနင်္လာနေ့ မနက်အစောကြီး လာထုတ်သွားတယ်။ ဘဏ်က ဒီငွေအပေါ်မှာ ဘယ်လို သွားသုံးမှာတုန်း။ ၂ ရက် လာထားတော့ ဘဏ်က အတိုးသာ ပေးလိုက်ရတယ် သုံးလည်း မသုံးလိုက်ရဘူး။ ဘဏ်ရဲ့သဘာဝက အပ်ငွေကို ပြန်အသုံးချချင်တာ။ပြန်အသုံး မချနိုင်ရင်တော့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့စိတ်ပျက်တာပေါ့လေ”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်၊ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တချို့က ခေါ်ယူအပ်ငွေ အပေါ် အတိုးနှုန်းလျှော့ချသော်လည်း ကမ္ဘောဇဘဏ်ကဲ့သို့သော အင်အားကြီးဘဏ်များတွင် ခေါ်ယူအပ်ငွေ (Call Deposit )အပေါ်ပေးနေသည့် အတိုးနှုန်း အပေါ် လျှော့ချခြင်း မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ခေါ်ယူအပ်အပ်ငွေ (Call Deposit) အတွက် ရရှိသောဘဏ်အတိုးနှုန်းသည် သိန်း ၁၀၀ အထက်လျှင် ၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ သိန်း ၁၀၀ အောက်တွင် ၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဘဏ်အများစုက ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် အပ်ငွေ တိုးလာစေရန် ဆွဲဆောင်သည့် အနေဖြင့် ပေးခဲ့ကြကြောင်း၊ ယခုအခါ ယင်းသို့ပေးရသည့် ဘဏ်အတိုးနှုန်းသည် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လာခြင်းကြောင့် ဘဏ်အချို့က သိန်း ၁၀၀ အထက် ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ သိန်း ၁၀၀ အောက် ၄ရာခိုင်နှုန်းသို့ ပြန်လည် လျှော့ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးဖြစ်သူ ဦးမျိုးမြင့်က “Call Deposit အပေါ် အတိုးနှုန်းလျှော့ချတာ စိတ်ထဲ သိပ်ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ အဓိကကချေးငွေရော စုငွေရောပါ အတိုးလျှော့တာ လုပ်စေချင်တယ်။ ဒါက ချေးငွေအပေါ်မှာ အပေါင်ပစ္စည်းလည်း ပေးရတယ်။ အတိုးက ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း။ အခြားအာမခံနဲ့ပေါင်းရင် ၁၃ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေတယ်”ဟု ပြောသည်။
ခေါ်ယူအပ်ငွေ (Call Deposit ) စနစ်ကို ဗဟိုဘဏ်က ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြန်လည် ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ခေါ်ယူအပ်ငွေ သည် ဘဏ်များတွင် အပ်ငွေတိုးလာစေပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဘဏ်များက ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်းစသည့် ငွေကြေးလည်ပတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘဏ်များတွင် ငွေလည်ပတ်စီးဝင်နေပါက ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို လျှော့ကျနိုင် ရန် အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
The post ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တချို့ ခေါ်ယူအပ်ငွေ အပေါ် အတိုးနှုန်းလျှော့ချ appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/2dMQbot http://ift.tt/1OYtTeJ
Posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Intelligence, Trade	| Leaveacomment |
Posted on September 25, 2016 by freeburma
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး မိတ်ဖက်များ အဖွဲ့အား အဆုံးသတ်ရန်တိုက်တွန်း
နယူးယောက် စက်တင်ဘာ ၂၄
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး မိတ်ဖက်များ အဖွဲ့ “Partnership Group for Peace, Development and Democracy in Myanmar (PGM)”၏ အဆင့်မြင့် အစည်းအဝေးကို ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်၌ ကျင်းပသည်။ အစည်းအဝေးတွင်
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ စနစ် ဖော်ဆောင်ရေး၌ ရလဒ်ကောင်းများတွေ့မြင်နေရကြောင်း၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရသစ်အပေါ် မြန်မာ ပြည်သူလူထုက တစ်ခဲနက်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းသည် ယင်းတို့၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုထားရှိခြင်းကို ပြသနေကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်များအတွင်းက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ရုန်းကန်ပေးဆပ်ခဲ့မှုများအပေါ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့်လည်း သြဂုတ်လကုန် က နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်း သည် ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိစ္စတွင် အလေးထားမှုကို ပြသခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများရရှိနေပြီဖြစ်သဖြင့် ယခု PGM အဖွဲ့အားအဆုံးသတ်ရန် စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားရာ ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာ၏ ကြီးမားသည့်မျှော်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးရန် အစိုးရအနေဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ ပါကြောင်း၊ မကြာသေးမီကလည်း အားလုံးပါဝင်မှုနှင့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်အပေါ်တွင် အခြေခံထားသည့် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကို ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယင်း ညီလာခံသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်း ရေးရရှိရန် အရေးပါသည့် ပထမ ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရအနေဖြင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် သာယာဝပြောမှု ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါကြောင်း၊
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အပြုသဘော ဆောင်၍တက်ကြွစွာဖြင့် ပုံမှန်ဆက်ဆံရေး ပြုလုပ်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်း တစ်ရပ်ကိုပေးရန် အချိန်ကျရောက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုးတက်မှုများ ဖြစ်ပေါ် နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ကုလသမဂ္ဂ အနေဖြင့် ယခင်နှစ်များနည်းတူ ထားရှိသည့် ယန္တရားအများအပြားဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံအပေါ် စောင့်ကြည့်သွားရန် မလိုအပ်တော့ပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ အထူးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန် (Mandate) အပါအဝင် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အကျိုးဆောင်မှုကဏ္ဍနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ အဆိုမူကြမ်း တင်သွင်းနေခြင်းတို့ကို အဆုံးသတ်ရန် အချိန်ကျရောက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် တက်ရောက်လာသည့် PGM အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များက မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပြုသဘောပါဝင်ဆွေးနွေးကြပြီး၊ နိုင်ငံအများစုက မြန်မာ နိုင်ငံကိစ္စအားဆွေးနွေးရန် ဖွဲ့စည်းထားသည့် PGMအဖွဲ့အား အဆုံးသတ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထောက်ခံပြောကြား ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အီးယူ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ အကြီးအကဲကကုလသမဂ္ဂတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၂၅ နှစ် လုံးလုံး အီးယူမှ ဦးဆောင်တင်သွင်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ အဆိုမူကြမ်းကိုယခုနှစ်တွင် တင်သွင်းခြင်းပြုတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။
PGM အဖွဲ့ဝင် (၁၅) နိုင်ငံတွင် သြစတြေးလျ၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ တရုတ်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျပန်၊ နော်ဝေ၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်၊ ရုရှားနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည်။
via Myanmar Info Minst http://ift.tt/2cMq78E http://ift.tt/1KnLGaX
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2cTaUUJ http://ift.tt/Tf1V41
Posted on September 20, 2016 by freeburma
ထိုင်းနိုင်ငံက လူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူလည်းဖြစ် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ အပါအ၀င်ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားရေး လှုပ်၇ှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား Andy Hall ကို ထိုင်းတောင်ပိုင်းက သစ်သီးစက်ရုံက အသရေဖျက်မူနဲ့ အီလက်ထရောနစ် မှုတွေနဲ့ တရားစွဲခဲ့တဲ့အမူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထောင်ဒဏ် ၄နှစ်နဲ့ ငွေဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2cWPrMy http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Intelligence, Labor	| Leaveacomment |
အမေရိကန်အစိုးရဟာ မူလဌာနေနိုင်ငံတွေ ကို ပြန်ပို့သင့်တဲ့ ရွှေ့ပြောင်း အခြေချနေထိုင်သူ ၈၀၀ ကျော်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ် မှားယွင်းစွာပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2cF5bCx http://ift.tt/Tf1V41
Posted on September 16, 2016 by freeburma
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ကန်ကုမ္ပဏီတွေကို ဖိတ်ခေါ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ အမေရိကန် စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဂတိလိုက်စားမှုကင်းတဲ့၊ ကျင့်ဝတ်တွေကို စောင့်ထိန်းပြီး တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတွေ ဖြစ်ဖို့ကိုလည်း ကြာသပတေးညက ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာ အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီက တည်ခင်းတဲ့ ညစာ စားပွဲအတွင်း ပန်ကြားသွားပါတယ်။ ညစာစားပွဲမှာ သတင်းသွားယူတဲ့ ဦးသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2cjBh7c http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Feedly, IFTTT, Intelligence	| Leaveacomment |
Posted in Cabinet - အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Feedly, IFTTT, Intelligence	| Leaveacomment |
Posted on September 9, 2016 by freeburma
မြန်မာ နဲ့ တရုတ် မဟာဗျူဟာ
စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆ – ကမ္ဘာ့အပယ်ခံ ဗမာစစ်အစိုးရကို အကြိုက်ပေးပြီး မြန်မာပြည်က လိုချင်တာတွေကို အလွယ်တကူ ရယူခဲ့တဲ့ တရုတ်ဟာ မိမိအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်တဲ့ မဟာဗျူဟာ ချမှတ်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ တရုတ်ဘက်က စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ရှိလာတာကို ဦးအောင်ခင် က သုံးသပ်ပြီး ကိုကျော်ကျော်သိန်းနဲ့အတူ တင်ပြထားပါတယ်။
via သတင်း | Burmese – VOA http://ift.tt/2cJ88oR http://ift.tt/Tf1V41
Posted on September 8, 2016 by freeburma